ဂဇက်တံခါးကို ဘလက်တအားဖွင့်လိုက်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဂဇက်တံခါးကို ဘလက်တအားဖွင့်လိုက်ခြင်း
Posted by black chaw on Oct 19, 2011 in Creative Writing | 29 comments
ဒီရက်ပိုင်း ရေအောက်က ဆက်ကြောင်းပျက်သည်ဆိုလားမသိ၊ ရွာထဲရောက်ဘို့ ကျော်နေခွနေရပါသည်။
သို့သော်လည်း ရွာထဲရောက်ရင်ဖြင့် ရွာအလှက ဆီးကြိုနေတော့ ကျော်ရခွရ ကျိုးနပ်ပါသည်။
ဒီတစ်ပတ် ဖတ်ပြီး ပြောစရာရှိသည်များကို ပြန် ပြောပြချင်ပါသည်။
Water-melon ၏ စပွန်ဆာရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ကို ဖတ်ရသည်။ မြန်မာမော်ဒယ်မလေးများ၏
ရပ်တည်နိုင်ဘို့ စပွန်ဆာရှာနေရပုံကို မီးမောင်းထိုးပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကတော့ မအောင်မြင်ခင် ကြိုးစားနေရဆဲ
မိဘစီးပွားရေး မတောင့်တင်းသည့် မော်လ်ဒယ်မလေးများ ရှောင်လွှဲလို့ မရနိုင်သော ပြသနာဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဟု
မြင်မိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကော ဘာများတတ်နိုင်ပါမည်နည်း။ ဒါက အနုပညာ နယ်ပယ်က ကိစ္စမို့ မေ့ချင်လည်း မေ့ထားလို့ရပါသည်။
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ပြောပြသော ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို ပြန်ပြောပြချင်ပါသည်။ နယ်တစ်ခု၏ ဆေးတက္ကသိုလ် တစ်ခုတွင် ကျောင်းတက်နေသော
တောမှကလေးမလေးတစ်ယောက် ကျောင်းတက်ဖို့ စပွန်ဆာရှာသော ကိစ္စကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ဖြေရှင်းပါမည်နည်း။
နေစရာအိမ်အသင့်၊ စားစရာမပူရ၊ မုန့်ဘိုးဆိုတာ သိန်းဂဏန်းကိုင်သုံး၊ကျောင်းသွားရင် ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ကယ်လေးနှင့်
၄ – ၅ သိန်းတန် ဟန်းဆက်နှင့် ဖုန်းကိုင်ပြီး လူချမ်းသာ သားသမီးတစ်ယောက်ကျောင်း တက်သလိုနေနိုင်ဘို့အတွက်
တစ်ပတ်ကို နှစ်ရက်၊ တစ်ရက်ကို နှစ်နာရီခန့် စပွန်ဆာကြီးကို အချိန်ပေးရုံပါပဲတဲ့၊၊ အနုပညာနယ်က
ကလေးမလေးတွေ အတွက်ကတော့ ဒါမျိုးတွေက မဆန်းပေမယ့် ပညာရေးနယ်ပယ်က ပညာရှာနေတဲ့
ကလေးမလေးတွေ အတွက် ကျတော့ အင်း…. ရင်လေးစရာကြီးတွေပါ water-melon ရေ။
ကြောင်ကြီးရဲ့ သမတကြီးရဲ့ ရေစီးကမ်းပြို ဝေဒနာ Fake Gesture ကို လည်းဖတ်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုညီညီဦး ပြောသည့် စာဥသီချင်းကိစ္စကြောင့်
Etone ရဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက် မပျက်သုဉ်းတဲ့ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ စံနစ်ဆိုး ကိုလည်း ဖတ်ဖြစ်ပါသည်။
ဆွေမျိုးထဲမှ အစ်မတစ်ယောက်၏ ကိုယ်တွေ့လေးကို ဥပမာပေး၍ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ စံနစ်ဆိုးကို ရှုတ်ချထားခြင်း ဖြစ်ပါ၏။
တဖြေးဖြေးတော့ ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ ချက်ခြင်းကြီး ပျောက်သွားဘို့ ဆိုတာကတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး etone ရေ။
တရုတ်နိုင်ငံမှာ သေဒဏ်ပေးနေတာတောင် လာဘ်စားမှုတွေရှိနေသေးတာကိုး နော။
ဆရာမကြီး TTNU ၏ အတန်းပိုင်ဆရာမနှင့် ဒွေး ကိုဖတ်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းသားတွေကို အင်္ဂလိပ်စာ
အသံထွက် သင်ရာမှာ ဒွေးရဲ့ (ကြော်ငြာမှာပါသော)ခွေးကြီးလို အောက်မေးလှုပ်ပြီး အသံထွက်ရမယ်ပြောရမှာကို
ဒွေးရဲ့ဂွေးကြီး လှုပ်သလို ဟု မှားပြောမိတဲ့ အကြောင်းလေးကို ဆရာမကြီးက သဘာဝကျကျ ဟာသလေးရေးပြ
ကိုစိန်သော့ ရဲ့ ရွာသူရွာသားတို့ရဲ့ တစ်နေ့တာ ကို ဖတ်ဖြစ်ပါသည်။ ဓါတ်ပုံလေးတွေက ပြောစရာမရှိအောင်
လန်းသလို စိတ်ကူးလေးတွေကပါ လန်းသော ပို့စ် ဖြစ်ပါသည်။ မဖတ်ရသေးပါက ရှာဖတ်ကြည့်စေချင်ပါသည်။
ဓါတ်ပုံ ကင်မရာ ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရေးနေပါသော အီတလီဘောလုံးသမားလေး အင်ဇာဂီရဲ့
Rule of Thirds and Photography Tips ကိုလည်း ဖတ်ဖြစ်ပါသည်။
ကိုသစ်မင်း ရေးသော တစ်ခါတည်းပါနှင့် နောက်ဆက်တွဲများကို ဖတ်ဖြစ်ပါသည်။ ရွာသူရွာသားတွေလည်း
အားလုံးဖတ်ပြီးဖြစ်မည်ထင်ပါ၍ ၀င်မပွားတော့ပါ။ အင်မတန်လှပသော စကားပြေတစ်ပုဒ်ဟု တင်စားချင်ပါသည်။
ကိုချိုရဲ့ ရှုခင်းလေးများပုံ ကို ကြည့်ဖြစ်ပါသည်။ ချန်ကေရှိတ်အမှတ်တရ အဆောက်အဦမှာ ရိုက်ထားသော ပုံများ ဖြစ်ပါသည်။
သူကြီးက သာသည့်မြေသို့ ဆိုသည့်ကဗျာတစ်ပုဒ် နှင့် မန်းတာ အမှတ်တရပါ ကိုချိုရေ။
မမရဲ့ သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် ကို ဖတ်ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာမရှိတုန်း ဆရာ့ဆိုင်ကယ်ကို အစီးသင်တက်စီးမိ၍
အိမ်ရှင်၏ သံပန်းတံခါးပျက်သွား သည့်အကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ မမက ရွာသူရွာသားတွေကို စဉ်းစားဘို့ အလုပ်ပေးသွားခဲ့ပါသည်။
“ထောင့်စေ့အောင် စီမံထားသော system တစ်ခုရှိလျှင် ၀န်ထမ်း အလွဲသုံးစား လုပ်၍ မရပါ။
စီမံမှုအားနည်း၍ ၀န်ထမ်းအလွဲသုံးလျှင် ၀န်ထမ်းတွင် အပြစ်မရှိ။ စီမံသူမှာသာ အပြစ်ရှိပါသည်။”
မတူတဲ့အတွေးတစ်ခုကို တင်ပြရသော်အလုပ်သမားလေး ဆိုင်ကယ်တက်စီးခွင့်ရ အောင် စီမံမှု ညံ့ဖျင်းခဲ့သော
ဆိုင်ကယ်ပိုင်ရှင် ဆရာ့မှာ အပြည့်အ၀တာဝန်ရှိ သည်ဟု ဆိုချင်ပါသည် မမခင်ဗျား။
Burma ရေးသော စကားဝိုင်းတစ်ခုက ကြားခဲ့ဘူးသော ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် ကို ဖတ်ဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်း ဌာနတစ်ခုမှာ နားလည်တဲ့ လူတွေကိုပဲ ခေါင်းဆောင်ခန့်သင့်တယ် ဟု သူတို့အဖေတွေ ပြောသော စကားဝိုင်း မှ
ကြားမိတာလေးကို စိတ်ဝင်စားပြီး ရေးထားတာပါ။ လုပ်ငန်းနားလည်ပေမယ့် management ကလိုသေးတယ်လို့
ထင်ပါတယ် burma ရေ။ လုပ်ငန်းနားလည်တာက တစ်ပိုင်း management က တစ်ပိုင်းလို့ ထင်မြင်မိပါတယ် burma ရေ။
တောင်ကြီး၊ အောင်ပန်း၊ ကလော မြို့များသို့ လမ်းသလားနေသည့် ကိုပေါက်၏ ခရီးသွား ဓါတ်ပုံနှင့် ခရီးသွားဆောင်းပါး လေးများက
ကိုပေါက်၏ ရွာအပေါ်ထားသည့် စေတနာကို ထင်ထင်ရှားရှား မြင်နေရပါကြောင်း ကိုပေါက်ကို အားပေးစကား ပြောချင်မိပါသည်။
တောင်ကြီးနားက ရေတံခွန် ဆိုရင် တကူးတက သွားရိုက်ထားကြောင်း သိသာပါသည်။ ကျေးဇူးပါ ကိုပေါက်ရေ။
Snow lay ၏ သိစေချင်ပါသည် ပို့စ် ကို ဖတ်ဖြစ်ပါသည်။ သူကြီးကိုယ်တိုင် ၀င် ရှင်းပေးနေရသော ပြသနာတစ်ခု ဟု ခေါင်းစဉ်တတ်ချင်ပါသည်။
အပြင်မှာ ဖြစ်ခဲ့သော ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခု၏ အဆက်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ အားလုံးငြိမ်း ချမ်းစေချင်ပါသည်။
snow lay ကလည်း သူကြီးပြောသလို မတူသောအတွေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာတွေ ချရေးပြီး ရွာသူ တစ်ယောက် ဖြစ်အောင်အရင်ကြိုးစားဘို့ ဘလက်ချော တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
“မန်းလေးဂဇက်တီက စီနီယာတွေအုပ်စုဖွဲ့ အက်မင်နဲ့ပေါင်းပြီး ၀င်လာသမျှ ဂျူနီယာတွေကို
ကောင်းကောင်းကြိုဆိုပါတယ်လို့ ကျန်တဲ့ဆိုဒ်တွေသိအောင်ကျွန်တော်ကြော်ငြာပေးပါ့မယ် “
ဟု ၀င်မန်းသူတစ်ယောက်ကို တွေ့ရပါသည်။ ပြောချင်ရာ ပြောတိုင်းသာ ယုံရမယ်ဆိုရင် ဧရာဝတီမြစ်ကြီး တောင်
ကျွန်တော်တို့ ပြန်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ ဟစ်ဟော့ခေတ်ဆိုတော့ အက်ဆစ် သီချင်းလေးကို စာသား လေးထည့်ပြီး ဒီလိုဆိုပြချင်ပါတယ်ဗျာ။
“ မန်းဂဇက် တစ်ခုသာဖြစ် ငါတို့ရမှာက အပြစ် “။ ဟားဟား ကျွန်တော်တို့ ရွာသားများကလည်း စိတ်လျှော့ ကြပါလို့ ငြိမ်းချမ်းရေးစကား
၀င်ပြောချင်ပါသည်။ ဇာဂနာ့ စကားငှားသုံးရရင် ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ အမေစုတောင် လက်စွဲနှုတ်ဆက်နေကြတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ
ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ ရန်စကားတွေ ဆက်မပြောကြဘို့ သောက်မြင်ကတ်ရင် လည်းကတ် ၀င်ပြောပါရစေဗျာ။
Htoosan ၏ ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်သို့ ကို ဖတ်ရသည်။ ပြုပြင်စေချင်သည်များကို ပြုပြင်ပေးပါရန် တောင်းဆိုသော စာ ဖြစ်ပါသည်။
နည်ရဲဇော် ၏ ဟင့်အင်း ပြောတတ်အောင် သင်ယူရဦးမယ် ကို ဖတ်ဖြစ်ပါသည်။ အားနာတတ်သူတစ်ယောက်၏ ငြင်းသင့်တာကို
ငြင်းဘို့ ကြိုးစားမည် ဟု ဆိုထားသော စာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ဘလက်ချောကလည်း အားနာတတ်သူ တစ်ယောက်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို
ရဲရဲတင်းတင်း တံဆိပ်ကပ်ပြီး ထောက်ခံဖြစ်ပါသည်။
Windtalker ၏ သူများအကြောင်းလည်း မပြောတတ်ပါ ဆိုသော ပို့စ် ကိုလည်း ဖတ်ဖြစ်ပါသည်။ မန္တလေးတွင် ဖြစ် ပွားသော အလှူ တစ်ခုမှ
အဆိပ်သင့်မှုတစ်ခု အပေါ်တွင် ကိုပေ ၏ သုံးသပ်ချက်ကို ရေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဖတ်ဖြစ် အောင် ဖတ်ကြည့်ကြစေလိုပါသည်။
ကိုရှုံး ၏ ဘယ်တော့လက်ထပ်ဖြစ်မှာလဲ ဆိုသော ပို့စ် ကိုလည်း ဖတ်ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ပြုရမှာ မ၀ံ့မရဲဖြစ်နေ သောလူတစ်ယောက်၏
ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးခွန်းထုတ်ထားသော ပို့စ်ဖြစ်ပါသည်။ ၀င်မန်းကြသူ အများအပြားအနက် FR ဟု ကျွန်တော်တို့ ချစ်စနိုးခေါ်သော
Foreign Resident ၏ ကွန်းမန့် နှင့် MaMa တို့၏ ကွန်းမန့်များမှသည် FR ကြီး မနေ့က ပို့စ်တစ်ခု ရေးဖြစ်သည် အထိဖြစ်သွားပါသည်။
ထိုပို့စ် ကြောင်းကို တော့ နောက်မှ ဆက်ရေးပါမည်။
အသက် ၈၀ ပြည့်မည်ဖြစ်သော ဆရာကြီးမောင်သာရ အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းများကို သူကြီးမှ ဆရာကြီးထံ
ယူသွားပေးမည် ဆိုသဖြင့် ရွာသူရွာသားများ တက်ညီလက်ညီ ၀ိုင်းဆုတောင်းနေကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။
ကိုချို၏ အိုးထဲကသစ်ပင်လေးများ ကတော့ ချစ်စရာဘွန်းဇိုင်းအပင်ငယ်လေးများ ၏ ဓါတ်ပုံများဖြစ်ပါသည်။
နောက်ထပ်ဖတ်ဖြစ်တာက etone ၏ အလှူခံလိမ် ဆိုသော ပို့စ် ဖြစ်ပါသည်။
သဒ္ဒါထက်သန်မှုဟာ သူတပါးလိမ်ညာလှည့်ဖြားခြင်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သတိပေးထားတာပါ။ ဒါလည်း ၀ိုင်းဆွေးနွေး ရမယ့် ကိစ္စ မျိုးမို့ ကိုယ်တိုင်သာ ဖတ်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။
သူကြီး၏ တောင်အာဖရိကစေ့ဆပ်ဆွေးနွေးရေး ဖြစ်စဉ် (အပိုင်း-၅) (နိဂုံးပိုင်း) ကိုဖတ်ရပါသည်။ ကိုယ်တိုင်ဖတ်ကြည့်ဘို့ တိုက်တွန်းပါသည်ခင်ဗျား။
ကိုသစ်မင်း၏ လူ/မြစ်/သစ်ပင် ဆိုသော ကဗျာလေးကိုလည်း ထည့်ပြောချင်ပါသည်။ ကဗျာဆရာတစ်ယောက်၏ အတွေးအရေးလေးကိုကိုယ်တိုင်ဖတ်ပြီး
ဘီလူးကြီး၏ ကျိုက်မှော်ဝန်း ရေလယ်ကျောက်တန်းဘုရား ဘရားဖူးဓါတ်ပုံများကိုလည်းကြည့်ရသည်။ ကျေးဇူးပါ ဘီလူးကြီးရေ။
နောက်ထပ်ရွှေလက်ရာရှင် ကိုစိန်သော့ရဲ့ အင်းဝရွှေမြို့တော်ဟောင်းဆီသို့ ၁+၂၊ တမုတ်မြို့ဟောင်းတစ်နေရာ
ပို့စ်တွေ ကလည်း လန်းနေတာပါပဲ ကိုစိန်သော့ရေ။
Moonpoem ၏ သိမ်ဖြူငွေလဲစင်တာတွင် မြန်မာလူမျိုးတိုင်းဒေါ်လာလဲလှယ်ခွင့်ရှိသည်ဆိုတာ မမှန်ကန်ပါ
ဆိုသော သတင်းလေးကလည်း မသိသေးသူများအတွက် တန်ဘိုးရှိပါသည်။
ချဉ်ပေါင်ပန်းကို လှအောင်ရိုက်နိုင်သော Weiwei ၏ ရုပ်ရှင်အညွှန်းလေးကိုလည်း ဖတ်ရပါသည်။
မနေ့က ကိုသစ်မင်း၏ midlife crisis ကို အကြံပေးကြည့်ခြင်း ကို ဖတ်ရပါသည်။ အခုတလော ကိုသစ်မင်းရေး တိုင်း ဘလက်ချော အကြိုက်တွေ့မိနေပါသည်။
ဆရာလုပ်နေခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ ဆရာဝန်တစ်ယောက်က လူနာတစ်ယောက်ကို နွေးနွေးထွေးထွေး ဆက်ဆံပြောဆိုနေခြင်းမျိုးနှင့်တူသည် ဟု
တင်စားချင်ပါသည်။ ဟုတ်မဟုတ် ဖတ်ကြည့်ကြပါဗျာ။
၀န်ကြီးများရုံးကိုပုဂ္ဂလိကသို့ ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုမည် ဆိုသော ဦးကောက်၏ ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ် မိပါသည်။
ညစ်နေသော စိတ်တွေအတွက် ဘီလူးကြီးက ကြည့်ပြီးပြုံးနိုင်စေဘို့ ရယ်စရာပုံလေးတွေ တင်ဆက်ပေးထား ပါသည်။ စိတ်လက်ပေါ့ပါးသွားတာပေါ့ခင်ဗျာ။
စားရမှာတောင်ကြောက်တယ် ဆိုသော nozomi ၏ ပို့စ်ကတော့ အနံ့ပျော့ ဆပ်ပြာမှုန့်များရောနှောသော ပဲဆီများနဲ့ အန္တရယ်များလာနေပြီဖြစ်တဲ့
အစားအသောက်အတုအယောင်အရောအနှောတွေ အကြောင်းရေးထားတဲ့ ပို့စ် ကောင်းလေးတစ်ခုပါ။ ဒါဖတ်ပြီးမှ စားပါလို့တောင် ရေးလို့ရပါတယ်။ဟားဟား။
အဖြည့်ခံဘ၀၏ တကိုယ်ရေ ညည်းဆိုခြင်း ပို့စ်တွင်မူ etone ၏ အပြောင်းအလဲကို မြင်ရပါသည်။ ဆက်လုပ် etone ဆက်လုပ်။
ပြီးတော့ ကိုဖက်တီးကြီးက လူဝင်စား အခန်းဆက် ဇာတ်လမ်း ရိုက်ပါသည်ပေါ့။ ဒီနေ့တော့ ပြီးမယ်ဆိုလား။
Moe Z ရဲ့ သတင်းကျွတ် အမှတ်တရဆိုတဲ့ ပို့စ်ကတော့ အချိန်နည်းနည်း နောက်ကျပြီးမှ ရောက်လာပါသည်။
နောက်ဆုံးဟော့ ဖြစ်နေသော Foreign Resident ၏ အဆဲခံချင်လို့ ကို ရေးတာ ဆိုသော ပို့စ်အကြောင်းနှင့် အဆုံးသတ်ချင်ပါသည်။
တရုတ်မုန်းသူများက ဆဲမယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပြီးသားပါ ဆိုတဲ့စကားမှာ တရုတ်မုန်းသူများဆိုတာကြီးကတော့ လက်မခံချင်ပါဘူးဗျာ။
ကျွန်တော်တို့က စာကိုဖတ်တာပါ။ လူကိုဖတ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါလေးတစ်ခုတော့ ဇောဒကတက်ခွင့်ပြုပါ။ တရုတ်တွေ ကုလားတွေက ကျွန်တော်တို့အတွက်
အရေးမကြီးပါဘူး။ ရေးတဲ့စာကသာ ကျွန်တော်တို့အတွက် အရေး ကြီးပါတယ်။ ရေးလိုက်တဲ့စာကသာ ရေးသူရဲ့ စိတ်ဓါတ်အဆင့်အတန်းကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။
တရုတ်တွေကုလားတွေ က မဆုံးဖြတ်ဘူးလို့ ထင်မိပါကြောင်း ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆိုချင်ပါတယ် FR ကြီး ခင်ဗျား။
၀ဲဆေးတောင်းသော ကြောင်လေးတို့ ၀ဲဆေးရသွားပါပြီလား။ သန်းကြွယ်သူဌေးကြီး မောင်ဘလှိုင် ကိုလည်း ဖတ်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထားရစ်ခဲ့တာလား ကျန်နေခဲ့တာလား
ဆိုသော နေ၀န်းနီ၏ ကဗျာ စသည်ဖြင့် တော်တော်များများ ဖတ်ဖြစ်ပါသည်။
ဒီတပတ် ဖတ်ဖြစ်သည်များကို အကုန်လုံးရေးနိုင်ရန် ကြံစည်ထားပါသော်လည်း အချိန်အခက်အခဲကြောင့် ချန်ခဲ့ရသော
ပို့စ် ပိုင်ရှင်များကို တောင်းပန်ပါသည်။
တတ်နိုင်သလောက်ကို လိုအပ်သည်ထင်ပါ၍ မည်သူကမှ တာဝန်မပေးပါပဲ လုပ်ကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမှားအယွင်းများ ပါခဲ့သော် ခွင့်လွှတ်ကြပါ။
ဂဇက်တခါး ကို တအားတော့မဖွင့်ပါနဲ့ ကိုဘလက်ချော ရယ် တံခါးဆောက်တုန်းက သံတွေအခိုးခံထားရတော့ ကျိုးသွားမှာစိုးလို့ပါ…
ဟေး lone ရေ။
ခင်ဗျားလေးပို့စ် အကြောင်းရေးမလို့ ကျန်သွားတယ်ဗျာ။
လမ်းကြုံရင် ပြောပေးကြပါ ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးလေ။
လုံးလေးကိုယ်စား ကိုနက်ပြောင်ကို ခွင့်လွှတ်ပါတယ်။ လုံးလေး ဘာလုပ်လုပ် ခွင့်လွှတ်ပါမယ်။ ကျနော့်ကိုလည်း ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။ :cool:
ဂဇက်တံခါးဆွဲဖွင့်လိုက်တော့…သဂျီးပုဆိုးခြုံပြီးကွေးနေတာ မြင်ရတာပေါ့ဂျာ 8O
ိုဟိုမရောက်ဒီမရောက် ရေးတတ်သလိုရေးထားတဲ့ မိုးစက်ရဲ့စာတွေကို သည်းခံပြီးဖတ်ပေးကြတာရော ကောင်းတယ်လို့ပြောပေးတာကိုရော (မြှောက်ပြောလည်းရတယ် )တကယ်ကျေးဇူးပါ..
ဘဘ ဘလက်ချောရေ တံခါးကိုဖြေးဖြေးဖွင့်ပါ သဂျီးနိုးသွားမယ်..
အင်း တော်သေးတယ် သူဖွင့်တဲ့ ဂဇက်တံခါးထဲမှာ ကိုယ်မပါသွားတာ သူမဖတ်ဖြစ်တဲ့ပိုစ့်တွေဖြစ်နေတာ ကံကောင်းနေတာလား ကံဆိုးနေတာလား မပြောတတ်….
ဂဇက်တံခါးကို တအားဖွင့်ကာ ရွာထိပ်က အမြင့်ဆုံး အပင်ကြီးပေါ် အတင်းတက်ပြီး ဘယ်သူကမှ တာဝန်မပေးပါပဲ တတ်နိုင်သလောက်ကို တစ်ရွာလုံး ခြုံကြည့်ပြီး ရွာလုံး ကြားအောင် အော်ပေးတဲ့ ဘလက်ချောရေ။
ရွာအစွန်အဖျားက ကျွန်တော့် တဲပုတ်လေးတွေကို မြင်တွေ့ပေးလို့၊ သွားလည်ဖို့ ဗျို့ဟစ်ပေးတဲ့ အတွက်ရယ်၊ အမြင့်ကြောက်လို့ မတက်ရဲ့တဲ့ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ တစ်ရွာလုံး ခြုံမြင်ခွင့်ပေးတာကို အထုး ကျေးဇူးပါဗျာ။
no, no မဖတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ရေးရင်းရေးရင်း တကယ်ကို အီစလံဝေသွားပြီး
မသေသပ် မကျနစွာ အဆုံးသတ်လိုက်ရသော ပို့စ် တစ်ခုပါ manawphyulay ခင်ဗျား။
မနေ့ကတင် ခင်ဗျားလက်ဆောင်ကို ကျွန်တော်အရင်ဆုံး လက်ခံထားတယ်လေဗျာ။
ကျွန်တော့် အက်ဒီဆင် ပို့ စ်မှာတောင်
ပန်ပန် ပြောလို့ သိရတာ
နီပါစေဗျာ။ မကြိုက်လို့ အနီပေးတော့လည်းယူလိုက်တာပေါ့ ကိုပေရာ။
ဘောလုံးသမားတွေလို ဒဏ်ငွေဆောင်ရတာမှ မဟုတ်တာ။
ကိုဘလက်ချောက တော့လေရွာတံခါးကိုရောက်ဖို့ ကျော်နေ၊ခွနေရတယ်နော်။ဒီမှာတော့ ဗျာ ပို့ စ်တင်မလို လုပ်တိုင်း log out ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။ဘာများမှားနေလို့ လဲဗျာ။ကိုခိုင်ရေ. နောက်ရွာသားများ သိကြရင် ကူညီပေးပါလားဗျာ။စာလေးရေးချင်လို့ ပါဗျာ။ခုတော့. ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ မသိဘူးနော့်။. ဟက်ခံရထား လို့ များလား??????
အဲဒီတော့.. ဆာဗာက ထုံးစံအတိုင်း ငွေတောင်းပြန်ပြီပေါ့..။
မီမိုရီ.. ထပ်တိုးဖို့လုပ်နေပါတယ်..။ တပါတ်လောက်တော့ ကြာမယ်ထင်တယ်..။
ညီလေး ဘယ်တွေ ပျောက်နေတာလဲ။ မတွေ့တာ ကြာပြီ။
ရန်ကုန်မှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ခဏခဏ ပြန်ထွက်ထွက် သွားလို့
ပြန်ပြန်ဝင်နေရတယ်။ နည်းနည်း ကျော်ခွပြီး ၀င်ခဲ့ပါ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ အကို. မတွေ့ တာကြာနေပါပီ။ခုတော့နည်းနည်းလေးရေးမလို့ ကြိုးစားနေတာလေ နှစ်ရက်ရှိပါပီ. အကောင့်ဝင်တိုင်း log out ဖြစ်ဖြစ်သွားလို့ ပါ။ကိုခိုင့်ကိုရော၊အားလုံးသော အကို ဆရာ၊ဆရာမ များကိုသတိတရ ပြင်းစွာရလျှက်ပါ။MG ကိုကျွန်တော် သိပ်ချစ်ရပါတယ်။
တစ်ပတ်စာကို တစ်ခါထဲနဲ့ဖတ်လိုက်ရတာ အဆင်ပြေတယ် …
အခုတလော ကိုဘလက်ချောနဲ့ ကိုသစ်မင်း တင်တဲ့ပို့စ်တွေကို မလွတ်တမ်းဖတ်ဖြစ်ပါတယ် …
ဓါတ်ပုံတွေရော စာသားတွေရော အားလုံးကောင်းပါ၏ ….
ကိုချောကလက်က ပို့စ်တွေ များများ ဖတ်ဖြစ်ပြီး ပို့စ်ရေးတဲ့ လူတွေကိုပါ တွဲပြီး မှတ်မိတာကိုး …တကယ့်ကို မာစတာဘရိန်းပါပဲ ကိုယ်တွေသာ ဖတ်သာ ဖတ်ပြီး တစ်ခါတစ်လေ ပို့စ်ရေးတာ ဘယ်သူပါလိမ့်ပြန်တွေးတာတောင် မေ့တေ့တော့
ကောင်းလိုက်တာ ကျော်ခွတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲ
လုပ်တတ်ဘူ ၀င်လိုရရင်ဝင်လိုက်တယ် မရရင်စိတ်ဆင်းရဲတယ် ဒါပဲတတ်နိုင်တာ..
မောချဲ တယ်တော်ပါလားဗျ !!
ရတနာပုံမြင်တာနဲ့ ငါ့ရွာပဲဆိုပီးဝမ်းသာသွား တာ … :D
ပီးမှ ရတနာပုံတယ်လီပို့ က Notice စာကြီးဖစ်နေတယ်ဗျာ..
char too lan ရေ။
ကျွန်တော်က ရွာကိုရောက်တာ တော်တော် နောက်ကျတယ်ဗျာ။
ရွာသားစစ်စစ်လို့လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို မသတ်မှတ်သေးပါဘူး။
ဒါကြောင့် ရွာထဲမှာ နေထိုင်ခွင့်လေးအတွက် စာမေးပွဲဖြေနေတဲ့ သဘောပါ။
ဒါခင်ဗျားရေးခဲ့တဲ့ ဂဇက်မှာ အဖြေထွက်တာက ပို့စ်ကို
အားလပ်ချိန်လေးများရှိခဲ့ရင် ကိုသစ်မင်းလည်း ပြန်ရေးဘို့ တောင်းဆိုပါတယ်ဗျာ။
ဘီလူးကြီးရေ စေတနာလေးပါ ပေါင်းထည့်ပြီး အပင်ပန်းခံပေးလိုက်တာပါ။
သဘက်ခါ (၂၁-၁၀-၂၀၁၁) မှာ ကျွန်တော့် အသက် ၄၁ နှစ် တင်းတင်းပြည့်ပါပြီ။
ကျွန်တော် အတွက် အချိန်ကတန်ဘိုးရှိလာပါပြီ။
ရောက်နေတဲ့ နေရာတိုင်းမှာ ဟိုနေ့က Moe Z ပို့စ်ထဲကလို
အနည်းဆုံးတော့ ရွာသူရွာသားတွေအတွက် ကောင်းတာလေးတွေ
ကျေးဇူးပါ MOEPWINTPHYU ရေ။
ကျွန်တော်က ပြန်ရေးပြမယ့် သူဆိုတော့ သေသေချာချာ ဖတ်ရတာပေါ့ဗျာ။
“အခုတလော ကိုဘလက်ချောနဲ့ ကိုသစ်မင်း တင်တဲ့ပို့စ်တွေကို မလွတ်တမ်းဖတ်ဖြစ်ပါတယ် ”
ဆိုတဲ့ weiwei ရေ။
ကိုသစ်မင်းနဲ့ တစ်တန်းထဲထားပြီး နေရာပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ။
ကျွန်တော်လည်း ကိုသစ်မင်း ပို့စ်လေးတွေ ကြိုက်တယ်ဗျ။ စေတနာပါတယ်လို့ကို ထင်နေမိတယ်။
ဆာဗာက ထုံးစံအတိုင်း ငွေတောင်းပြန်ပြီ ဆိုလို့
တကယ်တော့ ..ဒီလပိုင်းတက်လာတဲ့ ..ပို့စ်တွေ..ဖတ်ပြီး.. အားရနေမိတာပါ..။
ဒို့တတွေရဲ့ရွာကြီး… တော်တော်စည်ကားစိုပြေလာတယ် ထင်မိတယ်..။
အခုထိ.. ပိုစ့်ပေါင်း ၁သောင်းခွဲလောက်နဲ့.. မန်းပြီးရေးထားတာတွေ.. ၈သောင်းခွဲကျော်..
ဆာဗာကြီး.. ဂွီဂွမ်ဖြစ်တာ .. မဆန်းလောက်ပါဘူး..။
ဒီနှစ်ပိုင်း… ကိုယ်နေတဲ့မြို့ရဲ့.. လူမှုရေး.. ဘာသာရေးတွေမှာ.. အလှူတွေသိသိသာသာ လျှော့ချလိုက်ရတယ်..။ ခုံတွေသိမ်း.. အမှိုက်သိမ်း..စတဲ့.. လုပ်အားပဲ တတ်သလောက်ကူနိုင်တော့တာပေါ့..။ ငွေကြေးမလှူသလောက်ဖြစ်သွားခဲ့တာ..။
ကျန်တဲ့.. မိတ်ဆွေတွေ ..ဘယ်လိုသဘောထားကြတယ်မသိ…။
ကျုပ်ကတော့… မြန်မာတွေအတွက်.. လက်တွေ့ကျကျ… ပိုအကျိုးများတာကို .. ငွေအားလူအား..စိုက်ပြီး…ပညာဒါန.. ပြုလှူနေတာပဲလေ လို့.. စိတ်ထားဖြစ်ပါတယ်..။
ရွာထဲ..ရေးနေ..တွေးနေ.. တင်နေသူ..ရွာသားအပေါင်းလည်း.. အဲဒီအလှူထဲပါဝင်ပြီး.. ကုသိုလ်ရကြမှာပါ..။
လာဖတ်နေသူ. .သောင်းသိန်း.. သန်းက.. အကျိုးကျေးဇူးရသွားကြတယ် မဟုတ်လား..။
မကြာခင် အသက် ၄၁ပြည့်မယ့်.. ဘလက်ချော..
ချောကလက်ကိတ်မုန့် .. လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
အပျော်တစိမ့်စိမ့်နဲ့..ငြိမ်းချမ်းကျန်ရစ်မယ့် နှစ် ခုနှစ်ဆယ့်ကိုး…
တရစ်ရစ်တိုးပြီး… အောင်မြင်နှိုးထနိုင်စေကြောင်း…။ ။
ရွာဆော်ကြီး ဆရာချော ၏တံခါးဖွင့်ခြင်းကို မြင်မိပါကြောင်း ကျေးဇူးတင်လျှက်
ပိုချိုတယ်ဗျ။ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ။
ကိုဘလက်နဲ့ မွေးရက်သိပ်မကွာတဲ့ တူရာသီဖွားအချင်းချင်းဖို့ ပိုပြီးအကောင်းမြင်မိပါ၏ …
ဒီကလူတွေက ဂျီတော့မှာ လိပ်ခေါင်းလို ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် ဖြစ်နေတာတွေ့ မှာပေါ့ …
ဒီမိုကရေဇီနိုင်ဂံတော်မှာ မြေအောက်လား ရေအောက်လား(မသေချာ) အဲ့ဒီအောက်က
အခုဆိုက်အသစ် http://www.photelitephotelite.com ကနေကျော်ခွ ဝင်လို့ရတယ်ပြောတာပဲ …
ဒီတစ်ပတ်လုံး လိုင်းမကောင်းတာနဲ့ ၇ွာထဲ ဝင်မရဖြစ်တော့
အခုတော့ ကိုဘလက်ချောပိုစ့် ဖတ်လိုက်တာနဲ့တင် အဆင်ပြေသွားသလိုပဲ …………
မုန့်ကိုလာစားသွားပြီ ကိုဘလက်ချောရေ ဗိုက်ဆာနေလို့ ရွာသူထဲက ကျနော်တို့ ရွှေဘိုသူလေးဖြစ်တဲ့
မမမိုးပွင့်ဖြူ မကျော်တတ်မခွတတ်ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံသား မဟုတ်သလိုပဲ
ကိုဘလက် လုပ်ပေးလို့ အကုန်လုံးကို ဖတ်လိုက်ရသလိုပဲ ကောင်းပါတယ် ထပ်ဖွင့်ပါအုံး သော့ပျက်တော့လည်း သူကြီးက တတ်နိုင်ပါတယ် ညဘက်တော့ သွားမဖွင့်နဲ့နော် သူကြီးကတော့် အလုပ်တစ်ခု အနှောက်အယှက် ၀င်ရင်ဆက်ပြီး မလုပ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်တဲ့ ။ တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့ဗျာ ညဘက်မှာ စာရင်းတွေ ဘာတွေ လုပ်နေတတ်လို့ပါ